स्थानीय निर्वाचन र महिला नेतृत्व « Loktantrapost
स्थानीय निर्वाचन र महिला नेतृत्व
३ चैत्र २०७३, बिहीबार १८:१६
दिवङ्गत साहित्यकार जगदिश घिमिरेले एउटा अन्तरवार्तामा लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको वर्षौँदेखि नालामा जमेको फोहर सफा गर्नु हो भन्ने राखेको धारणा स्मरण भयो । १८ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको नालामा कति फोहोर जम्मा भयो होला आम मानिसलाई थाहा नहुन सक्दछ । तर कम्तीमा केही बुझेका लागि भने नाला कुडाकर्कटले भरिएको मात्र अनुभूति गर्न सकिन्छ । १८ वर्ष अघि जन्मेको वालक आज वालिग भएको छ, उसले पनि फोहोर जमेको नालामा सफा गर्न मदत गर्ने नै छ । हाम्रा लागि जित हार महत्वपूर्ण छैन, तर पनि निर्वाचन हुने आशामा म पनि खुसीले प्रफुल्ल छु ।
अर्कातिर, यो खुशीको गदगदी दिगो हुँदैन कि भन्नेमा सशङ्कित छु । साँच्ची नै हामी निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछौँ त ढुक्क हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । असन्तुष्ट मधेस एउटा कारण हो भने अन्य निर्वाचन सम्वन्धी वस्तुगत तयारी पनि त महत्वपूर्ण हँुदो हो । केही आधारभूत कानुन बन्ने हुन या हैनन् ? अनि निर्वाचनका लागि चाहिने मतपेटिका र मसी समेतको जोहो छैन भन्ने सुनिएको छ । आवश्यक सवारी साधन समेत अपुग छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । सडकको वैधानिकता कायमै राखेर कसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्नेमा फेरि अलमलमा परेको छु ।
यस्तैमा मेचीनगरमा महिला नेतृहरुको निर्वाचन प्रतिको मोह पढ्न पुग्छु । महिला नेतृहरु त उपाध्यक्ष मात्र हैन अध्यक्षकै दावी गर्न सक्ने हैसियत प्रकट गरेका छन् । कुनै पार्टीले महिला उम्मेदवारका विरुद्ध पुरुष उम्मेदवारी दिएको खण्डमा महिलाहरु पाटी र जाती भन्दा माथि उठेर महिलालाई नै विजयी वनाउने दृढता ब्यक्त गर्दछन् । यो दृढता कति टिकाउ हुन्छ भन्नेमा आफैलाई प्रश्न गर्दछु । नेपाली राजनीतिमा टिकाउ भन्दा पनि विकाउ हुने प्रवृत्ति हावी भएकाले भविश्यले नै महिलाका दृढतालाई कसी लगाउने नै छ, भविश्यलाई जिम्मा दिन्छु । जे भए पनि यो सङ्कल्प र दृढताका लागि महिला नेतृहरुलाई प्रशंसा नै गर्न मन लागेको छ ।
पुरुष सत्ता हावी भएको हाम्रो समाजमा महिलाहरुले आफ्नु हैसियत र भूमिका खोज्नुलाई अन्यथा लिन सकिदैन । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार ५१.४४ प्रतिशत महिला भएको अवस्थामा महिलालाई मुस्किलले ३३ प्रतिशत समेत दिन आनाकानी भएको छ । दिइएका स्थानमा समेत वैधानिकता पुर्याउनका लागिमात्र दिइएको छ । अर्थपूर्ण सहभागिता दिइएको छैन । कोषाध्यक्षमा राखिएका महिलाहरुले योजना सम्पन्न हुँदासम्म चेकवुक नदेखेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् ।
उम्मेदवार हुनु र निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्नु हालका लागि ठूलो कुरा होला तर महिला निर्वाचित नभएका र ठूला पदमा नपुगेका भने हैनन् । वि.सं. २०१५ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा द्वारिका देवी ठकुरानी विजयी भई पहिलो मन्त्री समेत वनेको इतिहास छ । द्वारिका देवि ठकुरानीदेखि विद्या भण्डारी समेत महिला नै हुन् । त्यसकारण महिला उम्मेदवार हुन विजयी वन्नु ठूलो कुरा हैन परिणाम आयो कि आएन भन्ने कुरा ठूलो हो । देशमा महिला नै प्रधान न्यायाधीश भएको अवस्था छ । महिला अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेकी सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीश भएकी छन् तर आफ्ना छोराको हत्यारा पत्ता लगाई कार्वाही गर्नुपर्ने माग राखी गोरखा फूजेलकी गङ्गामाया अधिकारी विगत लामो समयदेखि अनसनरत छिन् । स्मरण रहोस् यही मागका कारण उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको ३३४ औँ दिनको आमरण अनसनकै क्रममा निधन भएको थियो ।
महिला उम्मेदवार केका लागि महिलाले प्रष्ट पार्न जरुरी छ । दलको लाचार कार्यकर्ताका रुपमा दल कै भाषा वोल्ने हो र दलको घेरा भन्दा माथि उक्लन नसक्ने हो भने आजको यो दृढता भोलि पानीको फोकामा वदलिन्छ । आजसम्म त्यही भएको छ । दुर्गममा महिलाको मूल्य सुगममा एउटा पशुको समान छैन । सुगममा प्रसुति समयमा पशुले वरु निर्वाधरुपमा चिकित्सकीय सेवा पाएको छ तर दुर्गममा घण्टौँसम्म सुत्केरी ब्यथाले ऐया ऐया भन्दै महिलाहरु ज्यान गुमाउन वाध्य छन् । वोक्सीका आरोपमा मलमुत्र खुवाइएको छ । फलाम तताएर डामिएको छ । वेचविखन गर्ने र देह ब्यापारमा संलग्न गराउनेहरु खुलेआम समाजमा छाती फुकाएर हिडेका छन् । छाउपडीमा वस्दा सर्पको डसाइ र वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउने महिलाहरुको सङ्ख्या ठूलो छ । यी सृष्टिकर्ता हाम्रा आमाहरुले यत्रो सङ्कटका वावजुद समेत सन्तानको निरन्तर सृष्टि गरि नै रहेका छन् । तर यिनका प्रतिनिधिहरुवाट केवल पद ओगट्ने र लाभान्वित हुने वाहेक केही नयाँ परिवर्तन देखिएको छैन ।
प्रजातन्त्रको राग अलापेको २५ वर्ष भएको छ । अझ गणतन्त्र भनिएको छ । तर यस अवधिमा राज्यका सवै संस्थाहरु पङ्गु वनाइएका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, विद्यालय, खानेपानी, गैरसरकारी संस्थाहरु, कुलो नहरका उपभोक्ता समितिहरु सवै नै दलका भागवण्डामा चलेका छन् । त्यसकारण दल खोल्नु, उम्मेदवार दिनु र विजयी वन्नु ठुलो कुरा हैन, ठुलो कुरा भनेको महिलाका पक्षमा रुपान्तरण हुनु हो । रुपान्तरण त्यति वेला सम्भव हुन्छ जुनवेला तपाई दलको घेरावाट माथि उठ्नु हुने छ ।
वाधक पुरुष सत्ता मात्र हैन तेस्रो विश्वमा वाधक सुकिला महिलावाद पनि हो भन्ने गरिन्छ । सन ५० को दशक पछि विश्वका देशहरु उपनिवेशवादको नियन्त्रणवाट स्वतन्त्र हुदै अगाडि वढ्दा महिलावादी आन्दोलन समेत प्रवल रुपमा अगाडि वढेको थियो । उदार महिलावाद, माक्र्सवादी महिलावाद, आमूल महिलावाद, समाजवादी महिलावाद लगायतका आन्दोलनहरु विकसित भए पनि तेस्रो विश्वका महिलाको नेतृत्व सेता जातका वा अभिजाती महिलाहरुवाटै भएको भन्ने गरिन्छ ।
तेस्रो विश्वका महिलाहरु विश्वको यौनवजारमा विकाउ हुनु, रोजगारमा अवसर नपाउनु, एचआइभी एड्स जस्ता सङ्क्रमणको शिकार हुनु यही अभिजात वर्गको नेतृत्वको कारण हो भन्ने महिलावादीहरुकै धारणा रहेको छ । नेपाली महिलाको अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण समेत विदेशी महिलाहरुवाटै (लिन वेनेट, मेरी एम क्यामरुन, क्याथरिन मार्च, मेरी एम. मलास्क) वढी भएको र तिनकै शोधग्रन्थहरु विश्वविद्यालयमा पढ्ने पढाइने गरिन्छ । के नेपाली महिलाहरु अध्ययन अनुसन्धानमा काविल नै छैनन् त ? अवश्य छन् । यसका लागि पुरुष सत्ताको अवरोध र त्यसलाई चिर्ने महिला शाहसको कमी छ ।
यस्तो अवस्थामा महिलाहरुले निर्वाचनको विषयमा जागरुकता देखाउनु केही परिवर्तन भएको हो कि भन्ने आभाष मिल्दछ । आजसम्म प्राप्त भएका महिलाका पदहरु पुरुष सत्ताको दान र कृपावाट प्राप्त भएका हुन् या महिलाका योग्यता क्षमता र सङ्घर्षवाट प्राप्त भएका हुन् ? यसमा महिला नेतृहरु आफै विमर्श गरुन् । वास्तविक महिलाहरु नेतत्वमा पुग्न नसक्नु, महिला नेतृत्वले महिलाका मुद्धामा आधारित भएर अगाडि वढ्न नसक्नु हो आजको विषय हो । तेस्रो विश्वका महिला नेतृत्वहरु विकसित देशका महिलाहरुवाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा आधारित छन् भन्ने गरिएको छ, हेर्दा सत्य नै लाग्दछ । त्यसर्थ तपाईहरुको उम्मेदवारी पुरुषको दान र कृपावाट आउनु हुँदैन । पुरुषको कृपा उपाध्यक्ष अर्थात दोस्रो दर्जा हो तर तपाईको पुरुष सरह प्रतिस्पर्धाको दृढता कायम रहोस् । विजयी नै वन्नुस् र समाज रुपान्तरणका लागि लाग्नुहोस् अग्रिम शुभकामना ।